Izilwandle zomhlaba: izici, ukuhlukaniswa kanye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yize wonke amanzi eplanethi efana ncamashi, umuntu uhlukanise lawa manzi aba yizilwandle nezilwandle ngokwezimpawu zamanzi afanayo kanye nendawo okuyo. Ngale ndlela, kungenzeka ukuhlukanisa kangcono ukuhlukahluka kwemvelo, imithombo yemvelo kanye nejografi. Kuningi izilwandle zomhlaba ngale kwezilwandle eziyi-7 okwakucatshangwa ukuthi kudala. Ngayinye yazo inezici zayo futhi kukhona ezinye ezinkulu kunezinye.
Kulesi sihloko sizokutshela ngezilwandle ezahlukahlukene zomhlaba kanye nezimpawu zazo eziyinhloko.
1 Izilwandle zomhlaba
2 Izilwandle ezi-5 ezinkulu kakhulu emhlabeni
2.1 Ulwandle lwase-Arabia
2.2 ISouth China Sea
2.3 Ulwandle lwaseCaribbean
3 Izilwandle zaseSpain
3.1 Ulwandle iMedithera
3.2 Ulwandle i-Alboran
3.3 Ulwandle lweCantabrian
Ulwandle luyindawo yokuhlala izinkulungwane zezinhlobo zezinto kanye nendawo okuhamba ngayo imikhumbi. Ububanzi bawo bukhulu kakhulu, bukhulu kakhulu kunobuso bomhlaba, futhi aqukethe izimfihlakalo eziningi. Izilwandle futhi zitholakala eduze kwamashalofu ezwekazi. Ishalofu lezwekazi lapho kutholakala khona inani elikhulu lemithombo yemvelo kanye nokuhlukahluka kwezinto eziphilayo. Yindawo eseduze kwamazwekazi njengoba igama lalo likhombisa.
Iningi lezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ezihlala emhlabeni wethu zisolwandle lomhlaba. Futhi, ngokungafani nenkolelo evamile, angamaphaphu weqiniso omhlaba. Kubantu, bayizindawo zokuzithokozisa, ukuzijabulisa nokucabangisisa. Umthombo oqhubekayo kodwa ongapheli wamanzi ongafinyelela emakhaya ezingxenyeni eziningi zomhlaba. Ngenxa yokudoba, nakho kuyisisekelo esiyisisekelo sokudla kwezwe. Futhi ziyisisekelo semisebenzi yezivakashi futhi zilethe izinzuzo eziningi emazweni afana nelethu.
Ukube besinezilwandle zomhlaba zihlukaniswe izwekazi, sinohlu olufana nalolu:
IYurophu: I-Adriatic, iBaltic, i-White, i-English Channel, iCantabrian, iCeltic, i-Alboran, i-Azov, iBarents, iFriesland, i-Ireland, iMarmara, iNyakatho, i-Aegean, i-Ionia, iMedithera, iBlack neTyrannian
América: I-Argentina, i-Hudson Bay, iBeaufort, iCaribbean, iChilean, iCortés, i-Ansenuza, iBering, iChukotka, iGrau, iGreenland, iLabrador, iSargasso neGreat Lakes.
Asia: Okuphuzi, isi-Arabhu, okuMhlophe, iCaspian, i-Andaman, i-Aral, iBhendi, iBering, iCelebes, iSouth China, i-East China, iPhilippines, iJapane, i-Okhotsk, i-East Siberia, iSulu, i-Inland Seto, i-Kara, i-Laptev, i-Dead ne-Red.
I-Afrika: I-Alboran, i-Arabia, iMedithera ne-Red.
I-Oceania: Kusuka ku-Arafura, Kusuka eBismarck, Kusuka eCoral, Kusuka ePhilippines, Kusuka eHalmahera, Kusuka kuSolomon, Kusuka eTasmania, Futhi Kusuka eTimor.
Izilwandle ezi-5 ezinkulu kakhulu emhlabeni
Ngokwandiswa, kukhona uhlu lwezilwandle ezi-5 ezinkulu kakhulu emhlabeni. Lokhu okulandelayo:
Ulwandle lwase-Arabia nge 3.862.000 km²
ISouth China Sea nge 3.500.000 km²
Ulwandle lwaseCaribbean nge 2.765.000 km
Ulwandle iMedithera nge 2.510.000 km²
Ulwandle lweBering nge 2.000.000 km²
Sizocacisa kancane ukuthi ziyini izici zalezi zilwandle ezinkulu.
Imboza indawo ecishe ibe yizigidi zamakhilomitha-skwele ayizigidi ezine, uLwandle i-Arabhiya ulwandle olukhulu kunawo wonke emhlabeni. Yaziwa nangokuthi i-Oman Sea noLwandle i-Arabia. Itholakala e-Indian Ocean. Inokujula kwe- cishe amamitha angama-4.600 futhi unogu eMaldives, India, Oman, Somalia, Pakistan nase Yemen.
ULwandle i-Arabia luxhunywe noLwandle Olubomvu ngeBab-el-Mandeb Strait futhi luxhunywe nePersian Gulf ngeGulf of Oman.
Iziqhingi ezibaluleke kakhulu yiLaccadive Islands (India), Masira (Oman), Socotra (Yemen) ne-Astora (Pakistan).
ISouth China Sea
Imboza indawo engamakhilomitha-skwele ayizigidi ezingama-3,5, iSouth China Sea iyindawo yesibili ngobukhulu yolwandle emhlabeni. Itholakala ezwenikazi lase-Asia, eziningi zazo okuyiziqhingi ezingundabamlonyeni wezingxabano phakathi kwamazwe ase-Asia. Enye yezinkinga ezinkulu ezibhekene nalolu lwandle ukulahleka kwezinto eziphilayo. Lokhu kulahlekelwa kubangelwa ukudoba ngokweqile kanye nesiko lama-Asiya lokudla izinhlanzi eziluhlaza. Lezi zindawo zicebile ngezinhlanzi zazo zonke izinhlobo futhi zithinteka ukudoba ngokweqile.
Kufanele futhi ucabangele isici esingesihle njengokungcola. Masingakhohlwa ukuthi iChina inokunye kokungcola komoya okubi kakhulu nokulahlwa kukadoti. Ukungcola kwamanzi kulezi zilwandle kuphakeme impela.
Ngaphandle kweziqhingi zegolide ezinezihlabathi eziningi ezimhlophe nezihlahla zikakhukhunathi ebhishi, uLwandle lweCaribbean ngolunye lolwandle olujule kakhulu emhlabeni, lufinyelela ekujuleni kwamamitha ayi-7,686. Ngokombono we-oceanographic, ulwandle oluvulekile olushisayo. Enye yezindawo ezinokuhlukahluka okukhulu kakhulu nolwandle oluhlanzekile kakhulu. Ngalesi sizathu, isibe ngenye yezindawo zokuvakasha ezaziwa kakhulu emhlabeni jikelele. Unyaka nonyaka, izinkulungwane zezivakashi ziya kulesi siqhingi unyaka wonke.
ESpain sinezilwandle ezi-3 nolwandle olunqamula inhlonhlo. SinoLwandle iMedithera, uLwandle lweCantabrian, uLwandle i-Alboran kanye ne-Atlantic Ocean.
Le ndawo yolwandle iqukethe amanzi amaningi, amele u-1% wamanzi olwandle emhlabeni jikelele. Umthamo wamanzi kungamamitha ama-cubic kilometri ayizigidi ezingama-3.735 kanti ukujula kwamanzi okujwayelekile kungamamitha ayi-1430. Inobude obuphelele bamakhilomitha angama-3860 nendawo ephelele yamakhilomitha-skwele ayizigidi ezingama-2,5. Wonke la manani wamanzi avumela iziqhingi ezintathu zaseningizimu yeYurophu ukuthi zigeze. Lezi zinhlonhlo yiNhlonhlo Yase-Iberia, i-Peninsula yase-Italy kanye neNhlonhlo yaseBalkan. Iphinde igeze enhlonhlweni yase-Asia eyaziwa ngokuthi i-Anatolia.
Igama leMedithera livela kumaRoma asendulo. Ngaleso sikhathi yayibizwa ngokuthi "Mare nostrum" noma "uLwandle Lwethu". Igama leMedithera livela kwelesiLatini elithi medi terraneum, okusho ukuthi maphakathi nomhlaba. Leli gama laqanjwa ngenxa yemvelaphi yomphakathi, ngoba babazi kuphela umhlaba ozungeze le ndawo yasolwandle. Lokhu kubenza bacabange ukuthi iMedithera iyisikhungo somhlaba.
Lokhu kungaba yinto enkulu engaziwa emanzini aseSpain, mhlawumbe ngenxa yendawo yayo encane uma iqhathaniswa namanye amanzi. I-Alboran Sea ihambelana nendawo esentshonalanga yoLwandle iMedithera futhi ingamakhilomitha angama-350 ubude ukusuka empumalanga kuya entshonalanga. Ububanzi obukhulu ukusuka enyakatho kuye eningizimu ngamakhilomitha ayi-180. Ukujula okumaphakathi ngamamitha ayi-1000.
Ulwandle lwaseCantabrian lungamakhilomitha angama-800 ubude futhi lunokujula okuphezulu kwamamitha ayi-2.789. Izinga lokushisa kwamanzi ebusweni liyashintsha lisuke ku-11ºC ebusika liye ku-22ºC ehlobo. I-Atlantic Ocean igeza ugu olusenyakatho yeSpain kanye neningizimu-ntshonalanga enkulu ye-Atlantic coast yaseFrance. Esinye sezici zoLwandle lwaseCantabrian umoya onamandla owuphephetha, ikakhulukazi enyakatho ntshonalanga. Umsuka wale mibutho wenzeke eBritish Isles naseNyakatho yolwandle.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezilwandle ezahlukahlukene zomhlaba kanye nezici zazo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Izilwandle zomhlaba